2 Samuel 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
21 Ụnwụ+ wee daa n’ụbọchị Devid ruo afọ atọ, site n’afọ ruo n’afọ; Devid wee jụọ Jehova ase. Jehova wee sị: “Ikpe ọbara mara Sọl na ụlọ ya, n’ihi na o gburu ndị Gibiọn.”+ 2 Eze wee kpọọ ndị Gibiọn+ gwa ha okwu. (Ndị Gibiọn abụghị ụmụ Izrel, kama ha bụ ndị fọdụrụ ná ndị Amọraịt;+ ụmụ Izrel ṅụụrụ ha iyi,+ ma Sọl chọrọ igbuchapụ+ ha n’ihi ekworo+ ọ na-ekworo ụmụ Izrel na Juda.) 3 Devid wee jụọ ndị Gibiọn, sị: “Gịnị ka m ga-emere unu, gịnịkwa ka m ga-eji kpuchie mmehie anyị,+ ka unu wee gọzie ihe nketa+ Jehova?” 4 Ndị Gibiọn wee zaa ya, sị: “Okwu anyị na Sọl na ezinụlọ ya abụghị ihe ọlaọcha na ọlaedo,+ ọ bụghị anyị ka ọ dịịrị igbu mmadụ ọ bụla n’Izrel.” O wee sị: “M ga-emere unu ihe ọ bụla unu kwuru.” 5 Ha wee sị eze: “Nwoke ahụ nke gburu+ ọtụtụ n’ime anyị, nke kpakwara nkata+ ịla anyị n’iyi ka anyị ghara ịdị ndụ n’ókèala ọ bụla nke Izrel, 6 ka a kpọnye anyị mmadụ asaa n’ime ụmụ ya ndị ikom;+ anyị ga-agba ozu ha n’anwụ+ n’ihu Jehova n’ime Gibia+ nke Sọl, onye Jehova họọrọ.”+ Eze wee sị: “Mụ onwe m ga-akpọnye unu ha.” 7 Otú ọ dị, eze nweere Mefiboshet+ nwa Jọnatan nwa Sọl ọmịiko n’ihi iyi Devid na Jọnatan nwa Sọl ji aha Jehova ṅụọ.+ 8 Eze wee kpọrọ ụmụ ndị ikom abụọ nke Rizpa+ ada Eya mụụrụ Sọl, ya bụ, Amonaị na Mefiboshet, na ụmụ ndị ikom ise nke Maịkal+ nwa Sọl mụụrụ Edriel+ nwa Bazilaị onye Ebel-mehola. 9 O wee kpọrọ ha kpọnye ndị Gibiọn, ha wee gbaa ozu ha n’anwụ n’ugwu n’ihu Jehova,+ ha asaa wee nwụọ otu mgbe; e gburu ha n’ụbọchị ndị mbụ nke owuwe ihe ubi, ná mmalite owuwe ihe ubi ọka bali.+ 10 Otú ọ dị, Rizpa ada Eya+ chịịrị ákwà iru uju+ gbasaara ya onwe ya n’elu oké nkume malite ná mbido owuwe ihe ubi ruo mgbe mmiri si n’eluigwe zokwasị ha;+ o kweghịkwa ka anụ ufe+ bekwasị ha n’ehihie ma ọ bụ ka anụ ọhịa+ bịa n’ebe ha nọ n’abalị. 11 E mesịa, a kọọrọ+ Devid ihe Rizpa ada Eya, bụ́ iko nwaanyị Sọl, mere. 12 Devid wee gaa nata ndị nwe ala Jebesh-gilied+ ọkpụkpụ Sọl+ na ọkpụkpụ Jọnatan nwa ya, bụ́ ndị zuuru ya n’ámá obodo Bet-shan,+ bụ́ ebe ndị Filistia kwụwara+ ha n’osisi n’ụbọchị ndị Filistia gburu Sọl n’Ugwu Gilboa.+ 13 O wee si n’ebe ahụ chịrị ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jọnatan nwa ya; ha chịkọtakwara ọkpụkpụ ndị ikom ahụ a gbara ozu ha n’anwụ.+ 14 Ha wee lie ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jọnatan nwa ya n’ala Benjamin, na Zila,+ n’ebe e liri Kish+ nna ya, ka ha wee mee ihe niile eze nyere n’iwu. Chineke wee nabata arịrịọ ha maka ala ahụ mgbe e mesịrị ihe a.+ 15 Agha wee daa ọzọ n’etiti ndị Filistia+ na ndị Izrel. Devid na ndị na-ejere ya ozi wee gbadaa buso ndị Filistia agha; ike wee gwụ Devid. 16 Ma Ishbaị-binọb, bụ́ otu n’ime ụmụ ndị Refeyim,+ onye ube+ ya dị narị shekel ọla kọpa atọ n’ịdị arọ, onye kekwara mma agha ọhụrụ n’úkwù, chọrọ igbu Devid. 17 Ozugbo ahụ, Abishaị+ nwa Zeruya bịara nyere ya aka+ wee gbuo onye Filistia ahụ. N’oge ahụ, ndị ikom Devid ṅụụrụ ya iyi, sị: “Ị gaghịzi eso anyị na-aga agha,+ ka ị ghara imenyụ+ oriọna+ Izrel!” 18 O wee ruo mgbe nke a gasịrị na agha daara ha na ndị Filistia ọzọ na Gọb. Ọ bụ mgbe ahụ ka Sibekaị+ onye Husha+ gburu Saf, bụ́ otu n’ime ụmụ ndị Refeyim.+ 19 Agha dakwaara ha na ndị Filistia ọzọ na Gọb, Elhenan+ nwa Jeare-ọregim onye Betlehem wee gbuo Golayat onye Gat, onye okporo ube ya dị ka okporo osisi nke ndị na-ekwe ákwà.+ 20 Agha wee daa ọzọ na Gat,+ mgbe e nwere otu nwoke gbara ajọ dimkpa, nke nwere mkpịsị aka isii n’aka ya nke ọ bụla, nweekwa mkpịsị ụkwụ isii n’ụkwụ ya nke ọ bụla, iri abụọ na anọ ka ha niile dị; ya onwe ya kwa bụ otu n’ime ụmụ ndị Refeyim.+ 21 O wee na-akwa Izrel emo.+ N’ikpeazụ, Jọnatan+ nwa Shimiaị+ bụ́ nwanne Devid gburu ya. 22 Mmadụ anọ a bụ ụmụ ndị Refeyim bi na Gat;+ Devid na ndị na-ejere ya ozi gbukwara ha.+